Nd Yag Laser CO2 Laser Fekitori | China Nd Yag Laser CO2 Laser Vagadziri uye Vatengesi
Inotakurika Picolaser tattoo kubvisa chishandiso
Iyo Micro-PicoSure laser chishandiso chemhando yepamusoro-soro chinoshandisa tekinoroji yepamusoro yehuchi laser tekinoroji pasi rose uye ndicho chiridzwa chakakurumbira mumusika wekunaka.
Uchishandisa iyo laser's-yakasimba-simba pakarepo kubuda, iyo yakavhenekerwa pigment particles inonaya simba ipapo ipapo uye kuputsa. Mamwe acho anova zvidimbu zvidiki uye anoburitswa. Mamwe acho anomedzwa ne macrophage evanhu uye anoburitswa kuburikidza neiyo lymphatic system kubvisa pigment. Nekuti iyo chaiyo nyama inonhonga isingasviki laser mwenje pane yakatarwa wavelength yechiridzwa uye isingakuvadze zvakajairika nyama, inochengetedza kutendeka kwesero furemu uye haimboumbika vanga. Uku ndiko kurapwa kwekuchengeteka kusingaenzaniswe mune imwe nzvimbo. Kusvika padanho rakakura, rinovimbisa kuti vatengi havazotambura kubva kunetseka kwekurapwa
Nyanzvi PicoSecond Nd yag laser Machine
Picosecond laser iri laser chishandiso chinoshandisa ipfupi kupomba durations kunongedzera endogenous pigmentation uye exogenous ink particles (nyora). Iyo yepakati inosiyana zvinoenderana neiyo wavelength iri kushandiswa, ingave neodymium-doped yttrium aluminium garnet (Nd: YAG) crystal (532 nm kana 1064 nm), kana iyo Alexandrite crystal (755 nm).
Iyo PicoSecond Nd: YAG laser inotibvumidza isu kuti tibate yakafararira huwandu hwerudzi rweganda uye huwandu hwakawanda hweteki inki mavara. Iine iyo yekupedzisira-ipfupi picosecond kupomba kwenguva, pane kushoma kusagadzikana panguva yekurapa uye nekukurumidza kupora. Iyo laser inopinda mukati meganda mukati meganda uye inotanga kushanda pa pigment uremu uye inosvinwa ne pigment. Sezvo ma laser pulses ari akapfupika zvakanyanya mu nanosecond uye achiuya aine simba rakanyanya, iyo pigment mass yaizozvimba nekukasira yopwanya kuita zvidimbu zvidiki, zvinozobviswa kuburikidza nemetabolism. Muchiitiko ichi, iyo pigment inova yakareruka zvishoma nezvishoma uye pakupedzisira inonyangarika.
Simba rePicosecond laser rinogona kutorwa nebhuruu uye dema melanin. Iyo melanin inozopatsanurwa zvidiki zvekuti inogona kugadziriswa neiyo lymphatic system kana kugayiwa kunze kwemuviri. Nekudaro iyo nyora kana imwe pigmentation inozobviswa pasina kukuvara kune yakajairwa nyama. Mushonga uyu wakachengeteka uye uri nyore pasina nguva yekuzorora uye mhedzisiro.
FDA uye TUV Chiremba CE yakatendera Fractional CO2 laser
Fractional kumukazve ndiyo nyowani modality yekurapa laser iyo inogadzira akawanda mashoma microscopic yekupisa ekukuvara nzvimbo neinodzorwa upamhi, kudzika, uye huwandu hwakakomberedzwa nedziva rekuponeswa epidermal uye dermal tishu, zvichibvumira kukurumidza kugadziriswa kwe laser yakakonzera kupisa kukuvara.
Iyi yakasarudzika modality, kana ikaitwa neyakafanira laser kuendesa masystem, inogonesa yakakwira simba kurapa ichideredza njodzi.
FDA uye TUV Medical CE yakatendera Q Inoshandurwa Nd YAG Laser
Kurapa musimboti we pigmented dermatosis ye Q-Switched Nd: YAG Laser Therapy system iri mune inosarudzika photothermolysis ine melanin seye chromophore Q-Switched Nd: YAG ine yakakwira Peak simba uye nanoseconds-level pulse upamhi.
Melanin mu melanophore uye cuticle yakaumbwa masero ane pfupi pfupi inopisa yekuzorora nguva. Inogona kubva yangogadzira diki yakasarudzika simba inonwiwa granules (tattoo pigment uye melanin) kuputika pasina kukuvadza zvakakomberedza zvinyama. Iyo yakaputika pigment granules inoburitswa kubva mumuviri kuburikidza necirculatory system
Ichi chishandiso chinotenderwa neDFA uye TUV Medical CE, ichishandisa iyo wavelength ye1064nm uye 532nm, ikozvino ndicho chishandiso chakakurumbira kune ese marara tattoo kubviswa uye mamwe matambudziko eGanda pigment.
Sincoheren Yakasimbiswa muna 1999, inyanzvi yepamusoro-tech inogadzira zvigadzirwa zvekurapa uye zvekushongedza. Tine redu reKutsvagisa & Dhipatimendi Rekuvandudza, Fekitori, Dhipatimendi Rezvekutengesa repasi rose, Vagari vekune dzimwe nyika uye Pashure-pekutengesa
Dhipatimendi. Tine matavi matatu pasi rose uye Service-Dhipatimendi muAustralia, USA neGerman. Isu takawana FDA, Medical CE, TGA, CFDA & ISO 13485 zvitupa.Tinopawo mabasa eOEM neODM zvinoenderana nevatengi’ zvishuwo.